देउवा सरकारले फेरि राज्यकोषबाट आफ्ना आसेपासेलाई ८ करोड बाँड्ने तयारी « Postpati – News For All
देउवा सरकारले फेरि राज्यकोषबाट आफ्ना आसेपासेलाई ८ करोड बाँड्ने तयारी
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई पनि परीक्षण गर्छैाँ : गृहसचिव
आर्थिक सहायता वितरण अपारदर्शी र अनियन्त्रित हुँदै आएको छ, स्पष्ट मापदण्ड छैन आर्थिक सहायता वितरणको ?
– मापदण्ड प्रस्ट छ । आर्थिक सहायता दीनदुःखी गरिब र रोगीलाई दिने हो । अझै कडा रोग लागेकालाई दिने हो । क्यान्सर र किड्नी पीडितलाई दिने हो।
तपाईंले भनेजस्तो वास्तविक पीडितले पाउन सकेका छैनन् नि ?
– होइन, अब हामी राम्ररी परीक्षण गर्छैाँ । मापदण्डअनुसार गरिब, विपन्न र रोग लागेकालाई मात्रै सिफारिस र प्रस्ताव गर्छौं । गलत व्यक्तिलाई दिँदैनौँ।
उपचार गराइरहेकालाई अस्पतालकै नाममा रकम दिन सकिँदैन ?
किन नसकिने । सकिन्छ । अझै अब त रोगको प्रिभेन्सनमा जानुपर्छ भन्ने हो । रोग नै लाग्न नदिन के गर्नुपर्छ त्यसतर्फ सोच्नुपर्छ । आर्थिक सहायतालाई पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ ।
वास्तविक दीनदुःखीले पाउँदैनन् भनिन्छ नि ?
हामी अब वास्तविक पीडितलाई नै दिलाउने प्रयासमा छैाँ । पाउने नै दीनदुःखीले हो । विभिन्न सिफारिसका आधारमा दिने गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भयो भने पनि हामी त्यसलाई राम्ररी चेक गर्न सक्छौं । पाउनै पर्ने व्यक्तिले पायो कि अरू कसैले पायो भन्ने कुरा हामी आफंैले पनि चेक गर्न सक्छौं र चेक गरिरहेका पनि छांै ।
तपाईं ब्युरोक्रेट्सहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई आर्थिक सहायता वितरण गर्दा पारदर्शी र औचित्यका आधारमा दिनुपर्छ भनेर सुझाव गर्न किन सक्नुहुन्न ?
सुझाव दिइरहेका छौं । हामीले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा दिनुपर्छ भनिरहेका छौं ।
विगतमा एकै दिन ८ सय ८७ जनालाई आर्थिक सहायता बाँड्ने काम गरियो, अहिले पनि पाँच सयलाई बाँडिँदै छ, यो त अति भएन र?
देशका दीनदुःखी र रोगीलाई बाँडिएको होला नि । वास्तविक दीनदुःखी र बिरामीले पाए भने त राम्रै हो तर त्यस्ताले पाउन सकेनन् भनेचाहिँ सोचनीय हुन सक्छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा पनि के-कस्ताले पाए भन्ने कुरा हामीले अन्तिम परीक्षण गरेर मात्रै रकम दिने गरी गृहकार्य थालेका छैाँ ।